September 2020 – Let Pan Daily
ရန်ကုန် အတွက်ပဲ အဓိက မှာယူထားတဲ့ ကိုဗစ်အမြန်စစ် ကိရိယာတွေနဲ့ ဦးစားပေး စစ်ပေးမည့်သူများ
Let Pan | September 29, 2020
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက မှာယူထားသည့် ကိုဗစ် ရောဂါပိုး ရှိ ၊ မရှိ လျှင်မြန်စွာစစ်ဆေးပေးနိုင်မည့် Test Kit (စမ်းသပ်ကိရိယာအစုံ)များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက် အဓိကမှာယူထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးက ပြောပါတယ်။ “လောလောဆယ် ရန်ကုန်တိုင်းအတွက်ပဲ လျာထားသေး တယ်ခင်ဗျ။ ရန်ကုန်တိုင်း အတွက်ပဲ လတ်တလော အစီအစဉ်ရှိပါသေးတယ်။ ကျန်တဲ့
လူတစ်ယောက် ကို အပေါ်ယံ မကြည့်ကြ ပါနဲ့ဗျာ
photo model အမှူး က တော့ လက်ရှိ မှာ အောင်မြင်လျက် ရှိနေ တဲ့ photo model တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်ကို တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပြီး ချစ်စရောကာင်းလွန်း
မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင် ကို ညို့ယူ ဖမ်းစားနေတဲ့ မော်ဒယ် ဝင်းရွှေရည်သင်း
သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်စ မော်ဒယ် ဝင်းရွှေရည်သင်း သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ လှပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေကို ပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဆက်ဆီကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ကိုဗစ် နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ မ‌အောင်မြင် ခဲ့ရင် နောက်တဆင့်ဆုတ်ရမှာဖြစ်ပြီး ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်များ.. နောက်တဆင့် လျော့ချ ခဲ့ရသော်.. ကပ်ရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ် သာမန်ရောဂါပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရောဂါရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ပညာရှင်တွေက (၃) ခုစဉ်းစားပါတယ်.. ရောဂါရယ်.. လူရယ်.. ပတ်၀န်းကျင်ရယ်ပေါ့.. လက်ရှိ ကိုဗစ် ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်.. ရောဂါပိုးက ကျွန်တော်တို့ပတ်၀န်းကျင်မှာရှိနေပြီ.. လူကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
ရန်ကုန် ကိုဗစ် အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲ မှာ အသုံးပြု မယ့် နည်းဗျူဟာ အပြည့်အစုံ
ရန်ကုန်မှာ အခု အကြီးအကျယ် စစ်မယ်ဆိုတဲ့ ဗျူဟာက…. နံပါတ်တစ် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း အားလုံးကို စစ်မယ်…နံပါတ်နှစ် ကိုဗစ်သံသယလူနာအားလုံးကို စစ်မယ်..နံပါတ်သုံး ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ရမယ့်သူအားလုံး(ကလေးမွေးတာ၊ အူအတက်ပေါက်တာ စသည်ဖြင့် ခွဲစိတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ လူနာအားလုံး)၊ နံပါတ်လေး ကိုဗစ်ပိုးရှိတဲ့သူနဲ့ ထိတွေ့တဲသူအားလုံးကို စစ်မှာပါ…. စစ်လိုက်လို့ ပိုးမတွေ့ရင် ကျန်းမာရေး ပညာ ပေးမယ်..စစ်လိုက်လို့ ပိုးတွေ့ရင် အပိုင်းသုံးပိုင်းပြန်ခွဲမယ်…
သွယ်လျလှပတဲ့အမိုက်စား Body လေးနဲ့ ညှို့အားပြင်းနေပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိပို့စ်ပေးကာ ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာသာမက အဆိုပိုင်းမှာပါ ထူးချွန်သူလေး ကတော့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး နန်းဆုရတီစိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နန်းဆုရတီစိုးက ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးခဲ့သလို တေးသီချင်းလေးတွေကိုလည်း ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ နန်းဆုက အဆိုပိုင်းကို ပိုမိုဦးစားပေး လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်း ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖြူဖွေးဝင်းဥတဲ့အသားအရေလေးနဲ့ ဘိုမရုပ်လေးလို့တောင်
လူတော်တော်များများက ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးကိုပဲ ဂရုစိုက်တက်ကြပြီး စိတ်ကျန်းမာရေး ရဲ့ အရေးပါပုံကို တော့ မေ့ထားတက်ကြပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေး ဟာလည်း လူတွေ အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ စိတ်ချမ်းသာမှ ကိုယ် ကျန်းမာတာပါ။ စိတ်ချမ်းသာအောင် နေဖို့က ပြောရတာလွယ် သလောက် လက်တွေ့မှာတော့ ကျင့်သုံး ရတာ ခက်ခဲပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ
ကြီးပွား ချမ်းသာ ချင်ရင် အာစိဏ္ဏကံ ကုသိုလ် ဘုရားရှိခိုးဖြစ်ရဲ့လား။ သောက်တော် ရေရော ‌နေ့စဉ်ကပ်ဖြစ်ရဲ့လား။ ဘုရားပန်းလည်း အပတ်စဉ်လှူဖြစ်ရဲ့လား။ အဲ့လို့နေ့စဉ် လုပ်ရင် …ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတာလို့ ခေါ်တယ်။ မကြာခင် ကြီးပွါးတော့မယ့် လက္ခဏာပဲ။ သေချာ မှတ်ထား၊ လောကမှာ အကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့လူရယ်၊ ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့လူရယ်လို့ လူနှစ်မျိုးရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်
မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇာဇာထက် ကတော့ ပုရိသ အမျိုးသားတွေကြားမှာ ရေပန်းစားသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာဇာထက်က ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကပဲ အဆိုတော် နေလင်းကျော်နဲ့ လက်ထပ်ထားကြောင်း တရားဝင်ချပြထားခဲ့ပြီး သူမအပေါ် အထင်အမြင် လွဲမှားမှုတွေကို ဖြေရှင်းလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ဇာဇာထက်က သူမရဲ့အတွင်းရေးကို ဖွင့်ချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း အကောင့်တုတွေမျိုးစုံနဲ့ တိုက်ခိုက်ဆဲဆိုမှုတွေရှိကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ “ကိုဗစ်second wave
ငါဒီအချိန်ကြီးကိုရအောင်ကျော်ဖြတ်မယ် ဆိုတဲ့ “ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်” ရယ်၊ ဘာအခက်အခဲပဲရှိရှိတကယ်ကိုကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ “သတ္တိ” ရယ်ရှိရင်ရပြီ။ ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ “သူပြန်မလာခဲ့ရင် တို့၊ သူပြန်လာပါ့မလား” တို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေထက် “ငါဘယ်လိုနေရင်ပိုအဆင်ပြေလာမလဲ” ဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုပိုပြီးတွေးကြည့်ပါ။ လူတစ်ယောက်ကိုမေ့ဖို့က ချက်ချင်းကြီးဝုန်းခနဲ ဒိုင်းခနဲမမေ့သွားဘူး။ သူ့ကိုကိုယ်ဘယ်လောက်ချစ်ခဲ့သလဲဆိုတာရယ်၊ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာချစ်ခဲ့ရလဲဆိုတာရယ် ပေါ်မှာမူတည်ပြီး healing လုပ်ရတဲ့ အချိန်ကွာသွားတာတော့ရှိမှာပေါ့။ အဲ့လိုကြိုးစားနေတဲ့ အချိန်တွေအတွင်းမှာ ခဏခဏ အနှောင့်အယှက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဥပမာ